Skilift ngaphandle komnyango wakho - I-Airbnb
Skilift ngaphandle komnyango wakho
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguPaul
Indawo ethe tyaba esecaleni kumhlaba ‘weski in / ski out’ studio condo- 450 square feet kunye nepatio kunye nefoyer/igumbi lodaka lokugcina iskis / iibhodi.
Ifumaneka kwisiseko seSilver Queen situlo, kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kuyo yonke intaba. Nokuba kukutyibilika, ukukhwela ikhephu okanye ukuwela ilizwe, zonke zimi kanye ngaphandle komnyango wakho.
Iyunithi yethu ifumaneka kwiintsapho eziselula okanye abantu abatsha abafuna ukufikelela lula kwisitulo sokumkanikazi sesiliva. Kwakhona kulula ukuhamba-hamba ukuya kwidolophu yaseBrewers okanye echibini leBrewers.
Kwiindawo zokutyibiliza ekhephini eziphucukileyo, kube kanye kumphezulu weSilver Queen, kulula ukuya edolophini okanye ezantsi kwiComet Express apho unokufikelela kuyo yonke intaba.
Intambo ye-Wi-fi yasimahla
Ibhedi enkulu (ilala abantu abayi-2)
Isofa enkulu etsalwayo (ilala abantu abayi-2)
Idityanisiwe ilala abantu abadala abayi-4, zombini zikwigumbi lokuhlala
Igumbi lokuhlambela: Indlu yangasese enendawo yokuhlambela
ngaphandle kwegumbi lokuhlala eliquka ibhafu
elipheleleyo, ibhari enezitulo netafile yokutyela (izihlalo eziyi-4). Kukho izinto ezisisiseko zasekhitshini, i-microwave nomatshini wokuhlamba izitya.
Nceda, kungabikho RV okanye iiTrail njengoko indawo yokupaka ilinganiselwe.
Siyathemba ukuba uza kulonwabela ikhaya lethu kude nekhaya lakho kwaye uyalithanda iSilver Star Mountain njengathi!
4.94 · Izimvo eziyi-98
I-condo ibekwe ngendlela efanelekileyo kwiindlela ezinqumla ilizwe, ukubaleka ezantsi, ukukhwela ikhephu kunye neendlela zebhayisekile ezityebileyo. Ukusuka apho umgama wemizuzu emi-5 ukuya kwiDolophu yaseTube, idama lomkhenkce elingaphandle, i-10 pin bowling alley, iindawo zokutyela kwiFirelight kunye ne-pub. Kwimizuzu nje embalwa ulungile entliziyweni yelali yeSilver Star ngokwayo ngokuthenga, indawo yokutyela, iofisi yamatikiti, irenti yezixhobo kunye nevenkile yokutya ukuze kube lula kuwe.
I’m a professional airline pilot who loves to travel. I’m looking forward to trying Air BnB as an alternative to the usual hotel room experience.
Siza kunxibelelana nawe ngexesha lokubhukisha kwaye sikunikeze naluphi na ulwazi onokuthi ulufune. Sihlala edolophini, kwaye sikumbhalo okanye umnxeba kuphela kude ukuze siqinisekise ukuba iimfuno zakho ziyafezekiswa ngexesha lokuhlala kwakho.
Siza kunxibelelana nawe ngexesha lokubhukisha kwaye sikunikeze naluphi na ulwazi onokuthi ulufune. Sihlala edolophini, kwaye sikumbhalo okanye umnxeba kuphela kude ukuze siqiniseki…